Kunokwelapha ukuqotshwa kosana
Uma bekungenaso isihlalo ngosuku, abazali baqala ukuzwakala i-alamu. Kodwa mhlawumbe awudingi ukukhathazeka kanje. Kule ncwadi uzothola ukuhlinzeka usizo lokuqala kumntana ngaphambi kokufika kwesidokotela sesazi, ukuthi kanjani nokuthi yini okufanele ukhathazeke ekuthunjweni usana.
Izimpawu zokuqotshwa kanye nosizo lokuqala.
Ingane iqala ukukhala lapho kukhona okulimazayo, futhi kunjalo ayikwazi ukuchaza. Lokhu kusebenza nokuqothulwa. Uma uthinta isisu somntwana, kanti ngenkathi ezama ukusikhipha, aphikisana futhi akhala, kusho ukuthi yisikhathi sokumsiza. Okokuqala, udinga ukunikeza ingane yakho imaminerali, kodwa amanzi angabonakali, usebenzisa i-syringe oyinyumba ngaphandle kwenaliti noma usebenzisa isipuni. Uma okungenani amanzi amancane angena ngaphakathi, kusiza ukunciphisa isitulo futhi kuhlinzeke ukuhlukunyezwa. Uma le ndlela elula engasizi, ungasebenzisa amathiphu alandelayo.
Ikhambi elivame kakhulu nelula, elivamise ukuxazulula le nkinga yisisindo somzimba.
Ngemuva kokuba unike amanzi amanzi, qhubeka uhlalisa isisu. Okokuqala, geza izandla zakho ngamanzi afudumele bese uwagcoba. Uma ingane ihlale inenkinga yokuqothulwa, khona-ke ukubhula njalo. Kunconywa ukukwenza izikhathi eziningana ngosuku - emva kokulala, ngaphambi kokudla, ihora ngemva kokudla. Beka ingane emhlane wakhe, ngesikhathi ukuhamba kwe-massage ungacindezeli kanzima emzimbeni. Kuzingane kuze kube izinyanga eziyisithupha, isikhathi sokusikhipha umzimba siyimaminithi amabili, emva kwezinyanga eziyisithupha - imizuzu engu-2-3. Phakathi nokusikhipha udinga ukukhuluma nengane, ukumomotheka, ukuqapha isimo sakhe. Ukuphunga kufanele kwenziwe ukuze kungabi buhlungu futhi kungabangela ukungahambi kahle.
1. Intende yesokunene, ohlangothini lwangaphakathi, yenza izinyathelo eziyindilinga-zishaya ngeso lengqondo, kusukela enkabayeni. Ukwandisa okwedlulele umbuthano, osukela ekhoneni elingezansi elingaphambi kwe-hypochondrium elungile, ehamba ukusuka ngakwesokudla kuya kwe-hypochondrium engakwesobunxele, bese usuka phansi ekhoneni elingakwesokunxele. Zama ukungacindezeli esibindi nesipere.
2. Isifunda esilungile kumele sigxilwe ngezandla zombili ngezandla futhi sihlangane naso komunye nomunye wesisu esiswini.
3. Ngendwangu yakho yesokudla, ukushaya okungenhla - kusuka endaweni yenkaba nokuya phansi - kuya endaweni yokushicilela.
4. Okunye okunye okuyi-massage engxenyeni engezansi ye-colon, ehamba ngaphakathi kwe-rectum. Kubalulekile ukuhlukanisa isisu zibe izingxenye ezine. Esikwerelweni esingaphansi kwesobunxele yi-colon, ewela isikwele ukusuka phezulu kuya phansi ngokulandelana. Kungaba kuhle kakhulu lapho igcwele futhi izwa sengathi i-roller. Push emathumbu ngeminwe emibili. Ukuthungatha ukunyakaza kwemizuzu emibili, ungadluliseli iminwe yakho. Nge-massage enjalo, umntwana, onokuqothulwa, kufanele afune ukungena ngaphakathi emathunjini ngemva kwemizuzu engu-1-2.
Enye indlela i-gymnastics. Ngemuva kokusikhipha, ngaphandle kokushintsha isimo somntwana, ulele ngemuva, ubuye ugobe futhi ulahle imilenze izikhathi ezingu-6-8, uzicindezele esiswini. Yenza umsebenzi "ngebhayisikili" izikhathi ezimbili. Bese ucindezela imilenze yomabili ngokumelene nesisu somntwana, ubambelele kule ndawo imizuzwana emibili, uqondise imilenze.
Ngomunye umzimba, uzodinga ibhola lokuzivocavoca noma ibhola enezimpondo. Udinga ukubeka isisu somntanakho ebholeni ukuze athathe izingalo zakhe ngezimpondo, bese uyibhala imizuzu engu-1-2. Ngalesi sikhathi, udinga ukukhuluma nengane, uhlabelele izingoma, ukuze akwazi ukujabulela lokhu kuvocavoca, futhi angesabi.
Uma ukuqothulwa usana kusengadluli emva kokusikhipha, kufanele uzame izinqubo zamanzi. Gwilisa ngamanzi afudumele ngamanzi afudumele, siphume, uyifake ithawula bese uyisula. Bese ubeka umntwana owomile esiswini sikamama. Kungcono ukubeka ingane esiswini, hhayi ngemuva, uma i-colic noma ukuqothulwa. Ngakho-ke, ukuzithokozisa kwenziwa, okusiza ukugqugquzela okuqukethwe nokugesi ngaphakathi emathunjini.
Uma umntwana eqhubeka ekhala futhi akukho izinqubo ezisiza ukuqeda ukuqotshwa, bese uzama ukusebenzisa ikhandlela le-glycerin. Ukuze wenze lokhu, faka ingane ngemuva, ugobe imilenze esiswini bese ufaka ikhandlela ungene emgqeni. Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi kungenzeka ukwelapha ingane ngale ndlela ezimweni ezingavamile kakhulu, ngoba le ndlela iholela ekulutha umlutha.
I-catheter noma i-tube ye-vent.
Uma usana lukhuphuka futhi lwandisa ukukhiqizwa kwegesi, bese usebenzisa ipayipi legesi. Udinga ukuthenga i-catheter yama-rectal ekhemisi. Uma ufaka ipayipi yegesi noma i-catheter engxenyeni ye-rectum, faka ingane eceleni kwayo noma ngemuva kwayo, bese ugoba imilenze emathunjini. Ukwenza i-tube noma i-catheter ilula ukujova, kunconywa ukuba ubambise nge-petroleum jelly noma i-cream cream.
Ngaphambi kokusebenzisa i-enema, thintana nodokotela wezingane kuqala, akudingeki ukuthi uphathe ukuziqothula wena.
Yiziphi izidakamizwa ezingakwelapha ukuqothulwa kwengane?
Ukwelapha ukuqothulwa ezinganeni, odokotela ngokuvamile bacela isiraphu ye-lactulose (Dufalac). Ngama-colic emathunjini futhi u-bloating, unganika "i-Espumizan", "i-Plantex", "i-Sab Simplex" ngaphambi kokudla ngakunye.
Yini ongayidla ingane ngokuqokwa?
Ingane eyodwa enyangeni, qala ukunikeza idonsa elilodwa lejusi le-apula elifakwe emapulasheni amasha. Umama wokuncelisa kufanele afake izithelo nemifino eningi kangcono ekudleni kwakhe, ngaphandle kwebhanana. Kuwusizo ukuwasebenzisa ngendlela yama-saladi agqoke ngamafutha omquba. Kuhle ukusebenzisa iresiphi enjalo: izingcezu ezingu-2-3 zama-apricot omisiwe nemifula, izithelo zomvini ezincane zokuthululela i-kefir ebusuku, udle ekuseni. Konke lokhu kuzokwela ubisi lwebele, okuzokondla ingane, okuzosiza ekusunguleni ipheshana lezinyosi nesitembu.
Khumbula ukuthi ukuqothulwa kwengane ukuphulwa kwemisebenzi evamile yomzimba wakhe, hhayi isifo. Ngakho-ke, kufanele uthole izimbangela zokuqothulwa, ngokubhekisela kudokotela wezingane, futhi kuyadingeka ukuthi ungahlanganyeli emithi.
Indlela yokukhetha isihlalo sabakhubazekile esifanele usana
Isaladi yaseKorea nge imifino kanye nengulube izindlebe
I-Jam kusuka cherry (Kiev)
Ukuthakazeliswa komuntu ngefoni ephathekayo
Izinzuzo nokulimala kwe-kakao
Induduzo endlini eqashwe: TOP-4 izinto ezingabizi ezifanele ukuthenga
Ice cream: yingozi futhi inzuzo
Indlela yokuthokoza ekwindla
Cellulite nezindlela zokulwa nazo